सन्दिपको चमत्कारः १० ओभरमा ५ विकेट, ५ मेडन, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सन्दिपको चमत्कारः १० ओभरमा ५ विकेट, ५ मेडन
काठमाडौं। आइसीसी डिभिजन टु अन्तर्गत केन्याविरुद्धको खेलमा नेपाली युवा लेगस्पिनर सन्दिप लामिछानेले चमत्कारिक प्रदर्शन गरेका छन् । उनले १० ओभर बलिङ गर्दा ५ विकेट लिए । आफ्नो १० ओभरमा उनले मात्रै २० रन दिए ।
सन्दिपले बलिङ गरेका १० ओभरमध्ये ५ ओभरमा मात्र रन दिए । बाँकी ५ ओभरमा उनले कुनै रन नदिइ मेडन फाले । १६ ओभरसम्म कुनै विकेट लिन नसकेको नेपालको लागि १७ औं ओभरमा सन्दिपले नै पहिलो विकेट दिलाएका थिए । आफ्नो स्पेलको अन्तिम बलमा समेत विकेट लिँदै सन्दिपले ५ विकेट पूरा गरे । ४५ ओभरकोखेल सकिँदासम्म केन्याले ८ विकेटको क्षतिमा १३९ रन बनाएको छ ।